जीवनसंगीनीलाई फकाउने टिप्सहरु ! | दर्पण दैनिक
जीवनसंगीनीलाई फकाउने टिप्सहरु !
प्रकाशित मिति: २०७८ कार्तिक १७ गते ०७:२०
भनिन्छ जीवनसंगीनी माथि स्वर्गबाटै बनाएर पठाइएको हुन्छ रे ! जीवन यात्रामा यदि हाम्रो जिवनमा सबैभन्दा नजिक कोही रहिरहने छ भने त्यो पक्का पनि श्रीमतीनै हो । उनले हामीलाई विहान उठ्नेदेखि राती नसुतुञ्जेलसम्मै हाम्रो सेवा गर्ने गर्दछन् ।
उनीहरुलाई बेलाबेला हामीले हाम्रो शब्दद्धारा फकाइरहनु पर्दछ । यदि यस्तो कार्य सकिएन भने अवश्यनै जीवन खल्लो बन्न पुग्दछ र लोग्नेस्वास्नी बीच खटपट र तनाव सिर्जना हुन पुग्दछ ।
– बेला बेला सँगै घुम्न लगिरहने ।
– श्रीमतीका साथीहरूको सम्मान गर्ने र श्रीमतीकै साथी बीच बसेर कुरा सुनीदिने।
– आफ़्ना परिवार र साथीभाई माँझ श्रीमतीको प्रशंसा गर्ने।
– काली, परी, माया, बेबी, मेरी प्यारी,भुन्टी, मेरो महारानी भनेर संबोधन गरिरहने ।
-कुनै अन्य राम्री केटी संग तुलना गर्दै नगर्ने।
– माइतीको सकेसम्म भरपूर तारीफ गर्ने।
-घर सफा गर्ने, कपड़ा धुने, खाना पकाउने।
-आफू जतिसुकै बिजि भएपनी दिउँसो सम्झिने फोन गर्ने । विवाहको औठी सधै लगाउने र मोबाइलको स्क्रीन र पर्समा श्रीमतीको फोटो राख्ने।
– श्रीमतीले जस्तोसुकै स्वादको खाना पकाएपनी, तीम्रो हात त सारै मिठो छ भन्ने।
– श्रीमतीले ल्याईदिएको सामान मन नपरे पनी आहा ठ्याकै मेरो मनले खोजेको पाए भनी तारीफ गर्ने।
– श्रीमतीले बोलेको जोक्समा हाँस्ने र दुःखको कुरा गरे, हो मा हो मिलाउने।
– अफीसको कामले दिक्दार भएपनी, घरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै हाँस्ने र चुलो चौकामा साथ दिने।